PRO POS ၏ နှစ်သစ်ကူး အတာ သင်္ကြန် အထူးလျှော့ဈေး
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ပရိုမိုးရှင်း အနေဖြင့် PRO POS ကို ၁ နှစ်စာ ဝယ်ယူသူများ (သို့) ၁ နှစ်စာ သက်တမ်းတိုးသူများအတွက် ယခင် ၂ လစာ လျှော့သည့် အပြင်၊ နောက်ထပ် ၅ သောင်းကျပ်ကို ထပ်မံ လျှော့ပေးလိုက် ပါသည်။ အချိန်အကန့် အသတ်ရှိတာမို့ ပရိုမိုးရှင်း ကာလလေးမှာ ၅ သောင်း သက်သာမည့် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံရအောင် ယခုဘဲ 09 778915075 သို့ ဆက်သွယ်၍ ဆောင်ရွက် နိုင်ပါပြီ။
PRO POS ကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ စက်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။✅Phone, Tablet, Laptop, Desktop မည်သည့် Devices များဖြင့်မဆို အလွယ်အကူ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။✅Cloud System ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် Devices ပျက်လို့ Data တွေ ပျောက်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။✅အသစ်အသစ် ထပ်တိုးသော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အပိုကြေး...
တချို့သော အရောင်းဆိုင်များတွင် ရောင်းဈေးသည် ဝယ်ယူသည့် Customer ပေါ်မူတည်၍ ဈေးတင်ရောင်းရတာ၊ လျှော့ရောင်းရတာ မျိုး ရှိပါသည်။ PRO POS ကို ထိုကဲ့သို့သော ဆိုင်များတွင် ပါ အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ
တချို့သော အရောင်းဆိုင်များတွင် ရောင်းဈေးသည် ဝယ်ယူသည့် Customer ပေါ်မူတည်၍ ဈေးတင်ရောင်းရတာ၊ လျှော့ရောင်းရတာ မျိုး ရှိပါသည်။ PRO POS ကို ထိုကဲ့သို့သော ဆိုင်များတွင် ပါ အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။အရောင်းဆိုင်အများစု၏ လိုအပ်ချက်ကြောင့် POS တွင် ဈေးနှုန်းကို ပြင်ဆင်ရောင်းချခွင့် ပေးထားပါသည်။ ဒါပေမဲ့ Staff အနေဖြင့် ဈေးကို ပြင်ရောင်းလိုပါက Admin မှ သတ်မှတ်ထားသော...
ဆေးဆိုင် နှင့် ဆေးခန်း များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးသင့်တော်သော Pharmacy POS ဆော့ဝဲလ် ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
ဆေးဆိုင် နှင့် ဆေးခန်း များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးသင့်တော်သော Pharmacy POS ဆော့ဝဲလ် ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။Pharmacy POS Software တွင် အဓိက ပါဝင်သော Modules တွေကတော့Sale Moduleဆေး နှင့် ဆေးဖြင့် ဆက်စပ်သော ပစ္စည်းများကို ရောင်းနိုင်ခြင်းCustomer (or) Patient များသို့ ရောင်းချခြင်းအရောင်း အချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။Purchase...
သတင်းအချက်အလက်နည်း ပညာတက္ကသိုလ်&nbsp; (UIT) ၏ နေ့သင်တန်း စတုတ္ထနှစ်သို့ တိုက်ရိုက်တက်ခွင့်ရနိုင်မည့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဘွဲ့ကြို ဒီပလိုမာသင်တန်းကို လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းအဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်၌ စတင်ဖွင့်မည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာများ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းတက္ကသိုလ်ထံမှ သိရှိရသည်။ယင်းဘွဲ့ကြိုသင်တန်းက...
Visits : 2354
What is PRO POS?PRO POS isapoint-of-sale (POS) software designed to help small and medium-sized businesses (SMBs) run their operations, from managing their customers, tracking their inventory, and generating detailed reports on sales among others. Users can run PRO POS onadesktop, smartphone, or tablet and enjoyaseamless and smooth experience...
19 - 24 of ( 43 ) records